Baadriyiinta Radio Family oo ku wacdiyey in ay beri tahay maalintii qiyaamaha (Sawiro) – SBC
Baadriyiinta Radio Family oo ku wacdiyey in ay beri tahay maalintii qiyaamaha (Sawiro)
Posted by editor on May 20, 2011 Comments
SAWIIRO: Diyaarad Siday Gurmad Caafimaad Oo Katimid Puntland Oo Lagu Soodhoweeyey Muqdisho
Natiijada Kulamadii Xalay ee Champions Leaque.
Isku aadka naadiyada horyaallada Yurub
Magaalada New York ee wadanka Mareykanka roob ayaa si xoog leh uga da’aya, qof kastana wuxuu beegsanaya halkii uu roobka uga gaban lahaa laakiin koox isku sheegtey mutadawiciin ayaa wadooyinka geesaha ka taagan waxay dadka uga digayaan in ay tahay oo la joogo dhamaadkii aduunka iyagoo digniin ku bixinaya maalinta beri ah oo bishi ay tahay 21 May aduunku uu dhamaan doono oo ay tahay maalintii khiyaamaha, sida ay ku doodayaan kooxdan ILAAH ka fogaanshaha ku dhaqmaysa.
Meel kasta oo ka mid ah magaalada New York kooxdan sheeganaysa in ay dadka wacdinayaan ayaa dhooban waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin halku dhegyo ay dadka ugu sheegayaan in ay tahay beri dhamaadkii dunida, boorarka ay wataan waxaa ka mid ah “Maalintii Khiyaamaha”, “Dhamaadkii Dunida”, “Dhulgariir xoog leh”, “Maalintii ALLE” iyo ereyo kale oo ay ku sheegayaan in la gaaray xiligii dunida la rogi lahaa.
Ninka horkacaya kooxdan waa baadari Mareykan ah oo lagu magacaabo Harold Camping waa 89 sano jir wuxuu fariimo ka baahiyey raadiyaha uu aasaasay isagoo dadka fikradihiisa aaminsan & dad kale ee aduunka u sheegaya in la gaaaray dhamaadka aduunka sida uu sheegayo. Harold, wuxuu u waramay wakaalada wararka ee AFP, isagoo ka hadlaya sheekadan uu maskaxdiisa ka keensaey wuxuuna yiri “Sida uu sheegayo Kubtubka Bible-ka, gaar ahaan kitaabka Book of revelations (buuga mucjisooyinka), waxaa dunida ka dhici doono dhulgariir gees kasta oo ka mid ah dunida, ma hubno in dhulgariirku isku xili dhici doono maadama aduunku uu ku kala duwan yahay xaga waqtiga oo ay kala horeeyso saacadu, laakiin waxaa la filayaa in isku mar uu ka dhaco aduunka oo dhan” .
Nin kale oo lagu magacaabo Manny wuxuu ka mid yahay kumanaan qof oo ah kooxo diimeed xagjir ah oo diinta Kirishtaanka dadka ku wacyi galiya waxay leeyihiin Radiye lagu magacaabo Family radio oo dunida oo dhan laga dhageysto isla markaana ku baxa 83 luuqadood oo dunida looga hadlo ay ka mid tahay luuqada Soomaaliga, waxaana raadiyahan uu sii dayaa casharo diino ah oo ku aadan diinta Kirishtaanka.
Barta Internet-ka ee raadiyahaan leeyahay waxaa lagu qoray fariin sheegaysa in aduunku uu dhamaanayo iyadoo lagu qoray luuqad kasta oo ay ka mid tahay luuqada Soomaaliga.
Kooxdan xagjiriinta Kirishtaanka waxay soo xigtey aayado qubxi ah oo ay ku sheegayaan in uu qorayo kibaabka ay aaminsan yihiin ee Bible-ka kaasi oo ah in ay muujinayaan in la gaaray dhamaadkii aduunka iyagoo soo xigtey qisadii Nabi Nuux CS oo ahaa in ALLE uu ku wargaliyey in aduunka la halagi doono, waxay kooxdan sheegayaan in taasi ay dhacdey oo mudo 7 malamood ah.
Borce oo ka mid ah kooxdan ayaa ka hadlaya waxa uu ka aaminsan yahay in ay beri (Sabtida) ay tahay dhamaadkii aduunka waxaana uu yiri isagoo ka hadlaya quraafaadka uu aaminsan yahay “Hada waxaa jiri doona 21-ka May ka dib qaybo ka mid ah dunida oo badbaadi doona laakiin 5 bilood ka dib oo ku beegan 21-ka October inta kale ee ka badbaaday qiyaaha sabtida dhici doona, iyaguna dab ayaa lagu halagi doonaa”.
Laakiin muxuu sameyn doonaa Borce isagaa ayaa sharaxaya “Ilaa iyo inta laga gaaracayo jimcada, waxaan baryi doonaa ALLE, maalinta sabtida guriga ayaan ku sugnaan doonaa si aan u daawado wararka, waayo albaabada ayaa la xiri doonaa” .
“ILAAH ayaan u jilbo jabsan doonaa oo aan ka baryi doonaa cafis, iyo in iga badbaadiyo masiibada, waayo ILAAH wuxuu badbaadinayaa kuwa isaga rumaysan” ayuu yiri Borce.
Kooxdan xagjiriinta ah waxay rumaysan in ay jiri doonaan dad ka badbaadi doona masiibada qiyaamaha ee dhici doonto sabtida sida ay sheegayaan, waxay soo xiganayaan qiso ka mid ah qisadii lagu halaagay qowmkii nabi Nuux waxay leeyihiin waxaa jiri doona 200 milyan oo qof oo badbaadi doona sida dhacdey dadkii la badbaadiyey xiligii Nabi Nuux.
“Dad ayaa jiri doona nagu qosli doona, way qoslayaan, laakiin waxaan leeyahay cibaadaysa ilaa Jimcaha” ayuu yiri Borce oo ay ka taagneyd xaalad rumayn ah oo quus uu ka qabo aduunka in uu sii jiri doono wixii ka dambeeya beri oo sabti ah sida uu aaminsan yahay.
Harold Camping oo ah baadiriga aasaasay Radio Family oo xarumo ku leh wadamada Ruushka, South Africa & Turkiga wuxuu raadiyahan aasaasay sanadkii 1950-kii, waxaa raadiyahan lagu dhisay lacago ay iska ururiyeen dadka aaminsan fikradihiisa 120 milyan oo doolar ayaa loo ururshay, dalka Mareykanka oo kaliya wuuxu ku leeyahay 77 xarumo warbaahineed.
Laakiin Mr Camping ma ahan markii ugu horeysya ee dacarta ay aaminsan yihiin dunida u sheegaan ayna noqotay quraafaad sheydaanimo ah waxa ay sheegayaan 6-dii bishii Septmeber 1994-tii ayay sheekadan oo kale oo quraafaadka ah la soo shirtageen iyagoo sheegayay in maalintaasi ay tahay maalintii qiyaamaha oo ay dunidu rogmanayso. Si la mid ah sida ay hada isagu soo baxeen ayay meel kasta la istaageen in aduunku uu dhamaanayo laakiin ALLE Subxaanuhu wataacaalaa ayaa iska leh awooda maalinta qiyaamaha mana dhicin wixii ay aaminsanayeen kooxdan xagjiriinta Kirishtaanka ah ee Family Radio.
Sida uu cadeynayo Kibaatka qur’aanka kariimka ILAAH ayaa og maalinta aduunka ugu dambeysa, iyo maalinta q iyaamaha, sidoo kale waa arin u gaar ah awooda ALLE sheegista waxa dhici doona mustaqbalka mana haboona in la rumeeyo wax aan ka aheyn awooda ALLE iyo waxa imaan doona.
Baahinta sheekadan waxaan oga gol leenahay in ay dadka Soomaalidu la socdaan sheekooyinka quraafaadka ah ee dunida ka dhacaya, isla markaana uga feejignaadaan dacartan iyo waabayadan oo kale.
Mowliid Xaaji Cabdi
Comments / Faallooyinka
Ka Daawo Telefeshinka SBC Satellite-ka Thaicom 5
Satellite: Thaicom 5
Symbol Rate: 28066
Tweets by SBCSomalia
Dhageyso Wararka Idaacada SBC
Subax - 8:00 am
Duhur - 1:00 pm
Fiidkii - 7:00 pm
© 2001–2018 SBC. Xuquuqda Qoraaladda waxaa leh Warbaahinta SBC
Waxaa Naqshadan leh Warbaahinta SBC Somalia.